192-168-1-1 IP Address Info manaraka ny fitsipika ny mampiasa fomba vatan-kazo antontan-taratasy. Ireo antontan-taratasy miditra mpitsidika rehefa mitsidika tranonkala. Orinasa fampiantranoana rehetra izany ary anisan'ny tolotra fampiantranoana’ Analytics. Ny vaovao nangonin'ny vatan-kazo antontan-taratasy dia ahitana Internet Protocol (IP) adiresy, karazana navigateur, Internet Service Provider (ISP), daty sy ny fotoana hajia, miresaka / fivoahana pejy, ary mety ny isan'ny kitika. Ireo dia tsy mifandray amin'ny ny filazalazana izay fantatra manokana. Ny tanjon'ny vaovao dia ny mamakafaka fironana, ny fitantanana ny toerana, Tracking mpampiasa’ hetsika ao amin'ny tranonkala, ary manangona eny isan'ny mponina vaovao.
Toy ny tranonkala hafa, 192-168-1-1 IP Address Info mampiasa 'mofomamy'. Ireo mofomamy dia ampiasaina mba mitahiry fanazavana ao anatin'izany mpitsidika’ safidinao, ary ny pejy ao amin'ny tranonkala izay jerena na ny vahiny nitsidika. Ny fanazavana dia ampiasaina mba manatsara ny mpampiasa’ traikefa amin'ny alalan'ny customizing ny tranonkala pejy votoaty mifototra amin'ny mpitsidika’ karazana navigateur sy / na fanazavana hafa.
Google DoubleClick lokony Cookie
Mariho fa 192-168-1-1 IP Address Info tsy misy mahazo na ny fanaraha-maso ny mofomamy ireo izay ampiasain'ireo mpanao dokam-barotra antoko fahatelo-.
Zavatra pary Privacy Policies
Afaka misafidy ny mankarary ny mofomamy amin'ny alalan'ny mpitety safidy manokana. Hahafantatra bebe kokoa amin'ny antsipiriany momba ny fitantanana ny mofomamy amin'ny tranonkala navigateur manokana, dia mety ho hita eo amin'ny navigateur’ tsirairay tranonkala. Inona no Cookies?
Iray hafa ampahany amin'ny laharam-pahamehana dia manampy fiarovana ho an'ny ankizy raha mampiasa ny aterineto. Isika ray aman-dreny sy ny mpitaiza mampahery hitandrina, mandray anjara amin'ny, sy / na manara-maso sy hitari-dalana ny asa an-tserasera.
192-168-1-1 IP Address Info minia tsy misy manangona fantatra Information manokana avy amin'ny ankizy latsaky ny 13. Raha ny hevitrao ny zanakao fa nanome karazana fampahalalana ity eo amin'ny tranonkala, mafy isika mba hifandray mampirisika anao izahay ary avy hatrany dia hanao ny tsara indrindra avy hatrany ny ezaka mba hanala izany fanazavana avy amin'ny firaketana an-tsoratra.